Tan-dalàna… marin-toerana sy itokisana | NewsMada
Tan-dalàna… marin-toerana sy itokisana
Be ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fifidianana solombavambahoaka teo, araka ny tatitry ny mpanara-maso ny fifidianana. Tsy vitan’izany, eo ny hoe tsy fitokisan’ny olom-pirenena firy ny rafitra mpikarakara fifidianana sy ny fitsarana amin’izany. Izay no anisan’ny nampihena be ny taham-pandraisana anjara tamin’ny fandatsaham-bato?
Tsy hita tsinona izay fampiharan-dalàna, na nampitampim-bava sy nampiteny ny moana aza ny tsy fanarahan-dalàna. Resaka ihany ny hoe fanenjehana ara-pitsarana. Fialana fotsiny ny fampitandremana? Na ahoana na ahoana, hivoaka ihany ny voka-pifidianana ofisialy. Hahazo ny toerany sy handray ny andraikiny izay voafidy eo.
Hanao ahoana? Mahabe adihevitra politika izay, araka ny tombantombana. Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Hisy ny fahamarinan-toerana politika, fa mazava ny fahazoan’ny fitondrana ny maro anisa eny anivon’ny Antenimierampirenena. Miankina aminy koa ny maro amin’ireo hoe tsy miankina fa hanohana azy amin’izao.
Ho mafy sy azo antoka ary haharitra ny fahamarinan-toerana politika amin’izany rehetra izany? Eo amin’ny asa no hitsarana ny raharaha. Hanao ahoana ireo tsy niomana izay handrafitra tolo-dalàna, hanara-maso ny asan’ny governemanta, hitondra ny hetahetam-bahoaka, hanao tatitra amin’ny vahoaka ny amin’izany?
Saika natao fotsiny aloha izay hahazoana toerana amin’izay fanta-bahoaka na malaza, ohatra. Rehefa avy eo, mifampitady… Hanao ahoana ny asa rehetra amin’izany? Amin’ity hoe taham-pandraisana anjara ambany, tsy fanarahan-dalàna mahaza-dratsy ny sasany, ny tsy fifampitokisana be ihany. Kibo mitsara tena ny tsirairay.
Mila averina ny hasin’ny andrimpanjakana sy ny mpitondra, raha tiana ny hisian’ny fahamarinan-toerana, fitokisana, indrindra ny hoe fampandrosoana. Tsy fahazoan-toerana fotsiny ny fakana fahefam-panjakana, fa iasana araka izay nampanantenaina… hotsarain’ny taranaka sy ny tantara. Mbola misy azo atao? Alao hery…
Fisaintsainana izao, na eo aza ny Can sy ny fetim-pirenena.
Volana jona: anaty fihibohana ny fanamarihana ny volan’ ny ankizy 05/06/2020